बिना तलब ऊँटको पछिपछि – Gulmiews
३० जेष्ठ २०७३, आईतवार १०:३६ Raju Gautam
No comments	होम कार्की
दोहा (कतार), जेष्ठ ३०, २०७३। गुल्मी पल्लीकोट–४, ढाँपका टेकबहादुर रासकोटी शुक्रबार बिहान ११ बजेतिर सम्पर्क गर्दा ‘हावात’ (ऊँटले पिउने पानी राखिएको ट्यांकी) मुनि बसिरहेका थिए । भन्दै थिए, ‘तातो घामबाट फिरेकाले टाउकोबाट पसिनाको धारा छुटिरहेछन् ।’ रनक्क रन्किएको घामबाट छहारीमात्रै पाउँदा पनि ठूलो राहत मिलेको थियो ।
‘भर्खरै ऊँटलाई पानी खुवाउन लिएर आएको थिएँ,’ फोनमा बोले, ‘सबै ऊँट आइसकेका छैनन्, बाँकी ऊँटलाई सुडानी साथीले धपाउँदै लिएर आउँदैछ ।’
उनका अनुसार बिहान ५ बजे ऊँट फुकाएर लगिएको थियो । सबै ऊँटको खुट्टामा डोरीले बाँधिएको थियो, हिँड्न मिल्ने गरी । बेपत्ता दौडियो भने फेरि समात्न उनीहरूलाई मुस्किल पर्छ ।
माइला दाइ उसलाई भेट्ने उद्देश्यले साउदीमा रोजगारीमा आए । तर, उनी आफैं अलमलमा परे । कता हो कता ? धनकुमारी गाउँकै डाँडामा अल्झिरहिन् । बल्लतल्ल दूतावासले पीडित परिवारका तर्फबाट उनको अवस्थाबारे थाहा भयो ।
स्रोत: कान्तिपुरमा आज जेष्ठ ३० गते प्रकाशित होम कार्कीको समाचार, गुल्मी पल्लिकोटका पिडित रासकोटी सम्बन्धि भएकोले जस्ता को त्यस्तै प्रकाशित गरिएको छ। Comments comments	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	के महिनावारी पर सार्ने औषधिको प्रयोग स्वास्यको लागी राम्रो हो ?